Darpan Nepal – मोदीले भाषण मात्रै गर्ने पूरा नगर्ने र ओलीको किन भारतप्रति भुकाव बढ्दैछ ? (भिडियोसहित)
मोदीले भाषण मात्रै गर्ने पूरा नगर्ने र ओलीको किन भारतप्रति भुकाव बढ्दैछ ? (भिडियोसहित)
May 12, 2018adminSocial0Like
मोदीले शनिवार विहानै मुक्तिनाथ पुगेर विशेष पूजा गरे । मुक्तिनाथको दर्शन तथा पूजाअर्चनाका लागि मोदी त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट शनिबार बिहान ६ः३० बजे हेलिकोप्टरमार्फत त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका थिए । मोदीले मुस्ताङको मुक्तिनाथ मन्दिरमा विशेष पूजा गरेका हुन् । यो सँगै मोदी प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा मुक्तिनाथ मन्दिरमा पूजा अर्चना गर्ने पहिलो भारतीय प्रधानमन्त्री बनेका छन् ।मोदीलाई मन्दिरका मूल पुजारी कृष्णप्रसाद सुवेदीले झण्डै २५ मिनेट पूजाअर्चना गराएका थिए भने मन्दिरका अन्य पुजारी तथा भिक्षुहरूले स्वागत गरेका थिए । पूजा अर्चनापछि १०८ धारामा जल शेचन गरेका मोदीलाई बाह्रगाउँ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाका अध्यक्ष र जिल्ला समन्वय समितिका सभापतिले कालीगण्डकी नदीको शालिग्राम उपहार दिएका थिए । मोदीले योबीचमा मुक्तिनाथ मन्दिर परिसरमा झण्डै १ घण्टा बिताएका थिए । जहाँ उनी आफैले सेल्फी लिन समेत भ्याए ।
मोदीद्वारा पशुपतिनाथ मन्दिरमा विशेष पूजा अर्चना::मुक्तिनाथमा विशेष पूजा गरी मोदी काठमाडौं फर्किएका थिए । लगतै पशुपतिनाथ मन्दिर पुगेका थिए । मोदी पशुपतिनाथ मन्दिरको दर्शन तथा पूजा अर्चनाका लागि पूर्वनिर्धारित समयभन्दा १ घण्टा ढिलोगरी पुगेका थिए । मोदीलाई पशुपतिनाथ मन्दिरमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, पशुपति विकास कोषका पदाधिकारीलगायतले स्वागत गरेका थिए । मोदीले केहीबेर पशुपतिनाथमा विशेष पूजाअर्चना गरेपछि राजनीतिक भेटघाटमा सक्रिय भए ।
काँग्रेस र राजपको सामूहिक भेटघाट, दाहाल र यादवको एक्लाएक्लै::दुई दिने नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पशुपति दर्शन सकाएर विभिन्न दलका नेताहरुसँग भेटवार्ता गरेका थिए । नेपाली कांग्रेस र माओवादी नेताहरुले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेका थिए । मोदीलाई भेट्न कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पदाधिकारीको टिमसँगै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति विमलेन्द्र निधि, महामन्त्री शशांक कोइराला, कोषाध्यक्ष सीता यादव, विजय गच्छदार, लगायतका नेताहरु होटल हायात पुगेका थिए ।
नेपाली कांग्रेस नेताहरुसँग भेटवार्ता गरेका मोदीले लगतै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भेटवार्ता गरेका थिए । भेटवार्ताको लागि कांग्रेस नेताहरु सामूहिक रुपमा हायात होटलमा पुगेका थिए भने दाहाल एक्लै गएका थिए । दुबै भेटमा आपसी हित र द्वीपक्षीय सम्वन्धलाई अझ बलियो बनाउने विषयमा छलफल भएको नेताहरुले बताएका छन् ।माओबादी अध्यक्ष दाहालसंगको भेटपछि राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेताहरुले मोदीसंग भेटवार्ता गरेका थिए । मोदीलाई भेट्न राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुरसहित राजेन्द्र महतो, अनिल झा, राजकिशोर यादव, शरतसिंह भण्डारी र महेन्द्र राय यादव होटल पुगेका थिए । मोदीले मधेसी दलहरु मिलेर आफ्नो शक्ति बढाउन सुझाव दिएका थिए ।मोदीलाई संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि एक्लै हायातमा भेट गरेका थिए । त्यस लगत्तै भारतीय दूतावासले आयोजना गरेको दिवा भोजमा नेताहरु सहभागी भएका थिए ।
शुक्रवार साँझ नै उनले एमाले अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई द्धारिका होटलमा भेट गरेका थिए । जहाँ मोदी र ओलीबीच नेपाललाई भूपरिवेष्ठित देश नरहोस भनेर जलमार्ग मार्फत जोड्ने काठमाडौं रक्सौल रेलमागको सर्वे छिट्टै गर्ने, भारतले भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा भावा ट्रोमा रेडियो थेरापी मेसिन छिट्टै जडान गरिदिने, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको डीपीआर छिट्टै बनाउने, कृषि सहयोग अनुसन्धान, शिक्षामा सहयोगको रोडम्यापका साथै ब्यापार सम्वन्धलाई अझ बलियो बनाउन ‘ट्रिटी अफ ट्रेड’लाई पुनरावलोकन गर्नै सहमति समेत भएको छ । ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रोको शिलान्यास गरेको भन्दै मोदीले ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ अध्याय जोडिएको भन्दै ऊर्जाका अरु सहयोग परियोजनामा अगाडि बढाउँने सहमति समेत भएको हो ।
मोदीलाई महानगरको नागरिक अभिनन्दन, ५५ केजीको मूर्ति उपहार:;राजनीतिक भेटघाटपछि मोदीलाई यसपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले नागरिक अभिनन्दन गरेको थियो । काठमाडौंस्थित राष्ट्रिय सभागृहमा एक कार्यक्रम गरी महानगरपालिकाले मोदीलाई नागरिक अभिन्दन गरिएको हो । महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले महानगरको कलात्मक साँचोको प्रतीक हस्तान्तरण गरेर अभिनन्दन गरेका थिए । अभिनन्दन समारोहमा मोदीले नेपाल, नेपाली र काठमाडौं सहरको प्रशंसा गरे । उनले काठमाडौं सहरको कला, संस्कृति र रहनसहनको लामो व्याख्या गर्दै हिमालयको काखमा बसेको एक अनमोल रत्न रहेको बताए ।
उनले अर्को पटक नेपाल आउँदा बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनी पुग्ने पनि बताएका थिए ।मोदीले नेपाल पनि आईपीएलसँग जोडिएको भन्दै खुसी व्यक्त गरे । उनले नेपाली क्रिकेटर सन्दिप लामिछानेको नाम समेत लिए ।मोदीलाई ५५ केजीको वुद्धको मूर्ति महानगरपालिकाका मेयर शाक्यले उपहार दिएका थिए । महानगरपालिकाको नागरिक अभिनन्दनपछि मोदी सिधै त्रिभुवन विमानस्थल पुगेका थिए । उनलाई परराष्ट्र सचिव शंकरदास वैरागी र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले विदाई गरेका छन् । २ दिने राजकीय भ्रमण सकेर मोदी शुक्रवार नै स्वदेश फर्किएका छन् ।
मोदीले बोले एउटा गरे अर्को::भारतको २ दिने राजकीय भ्रमण सकेर मोदी स्वदेश फिरेका छन् । यो २ दिनको नेपाल भ्रमणका क्रममा मोदीले गर्नुपर्ने र गरेका केही विषय र मुद्धाहरुले अहिले महत्व पाएका छन् । मोदीले नेपाललाई असल छिमेकी भन्नु र नेपाल विना भारतको अस्तित्व नै नरहेको समेत बताए । तर के मोदीले असल छिमेकीको नातामा त्यही चरित्र ब्यबहारमा देखएका छन् त ? कि बोलीमा मात्र सिमित हुन् मोदी ? यो प्रश्न आम रुपमा उठेको छ ।
आर्थिक सहयोग बोल्ने मात्रै गर्ने होइन ?/::मोदीले नेपालमा गर्ने भनेका सहयोग आजसम्म पनि पाउन नसकिरहेको अबस्थामा मोदीको हालको सहयोगमा नेपालीले आशा र अपेक्षा राख्ने ठाउँ कमै देखिएको छ । २०७१ सालमा पहिलोपटक नेपाल भ्रमणमा आउँदा नरेन्द्र मोदीले नेपालको विकासको लागि १ खर्ब सहयोग गर्ने बाचा अझै पुरा भएको छैन । तत्कालिन ब्यबस्थापिका संसदमा मादीले यसरी सहयोगको बाचा गरेका थिए । सुन्नुहोस् ।
र अहिले पनि उनले प्रदेश नम्बर २ लाई १ अर्ब सहयोग दिने बताएका छन् । त्यस्तै मोदीले भक्तपुर क्यान्सर अस्पताललाई भाभाट्रोन रेडियो थेरापी मेसिन दिने घोषणा गरेका छन् । नेपालको स्वास्थ्यक्षेत्रमा पनि आफुले सहयोग गर्ने भन्दै मोदीले भारतमा विकास भएको मेसिन नेपाललाई दिने बताएका हुन् ।पहिलो पटक नेपाल भ्रमणमा आउँदा मोदीले २०७१ साउन १८ गते पशुपतिनाथ मन्दिरमा रुद्राभिषेकसहित विशेष पूजा गरेका थिए । पूजापछि उनले पशुपति मूल मन्दिरको जीर्णोद्वारका लागि २५ करोड भारु र सरसफाइका लागि ५ करोड रुपैयाँ सहयोग घोषणा गरेका थिए । तर, मोदी चार वर्षको अवधिमा तेस्रो पटक नेपाल भ्रमणमा आउँदा पनि उक्त सहयोग नेपालले अझैसम्म पाएको छैन । यसअघि भूकम्प पीडितलाई भारतले घोषणा गरेअनुसारको सहयोग पनि नेपालले पाएको छैन । पहिले नेपालको संसदमा नै बसेर गरेको वाचा पनि पुरा नगरेका मोदीले अहिलेको वाचा पुरा गर्लान या नगर्लान शंका उत्पन्न भएको छ ।
भूकम्पको पीडा बोले नाकाबन्दी उच्चारण नै गरेनन्::भ्रमणका क्रममा मोदीले हरेक भाषणहरुमा भुकम्पका कारण नेपालीले भोगेको पीडाबारे बोले । तर भुकम्पको पीडामाथि उनकै नेतृत्वले गरिदिएको नाकाबन्दीको बारेमा मोदीले शब्द पनि उच्चारण गरेनन् । नेपाललाई झण्डै ५ महिना नाकाबन्दीमा राखेर बन्दी बनाएका मोदीले नेपाल विना भारतको अस्तित्व नै नरहेको बताए र सम्बन्धको प्रगाढताको बयान गरे । जुन पटक्कै सुहाएको थिएन । भारतबाट जसरी सिमामा, र डुवानले प्रताडित छ नेपाल ती विषयमा बेमतलबी बन्दै असल छिमेकीको चरित्र बयान गर्नु जायज देखिँएन ।
न नोटबारे न ग्याँस बुलेट नै चल्न दिए::भारत सरकारले २०१६, ९ नोभेम्बरदेखि लगाएको ५ सय र हजारका नोटको प्रतिबन्धबाट नेपाली वित्तिय बजारमा ठूलो असर परेको छ । जसलाई सुल्झाउनेबारे मोदी उत्सुक देखिएनन् । यो कुरै नगरी नेपाली अर्थ बजारको बखान चाहीँ गर्न भ्याए मोदिले । त्यस्तै नेपाली लगानीकर्ताले खरिद गरेको बुलेट चल्न दिएको छैन । यो बिषय पनि लामो समयदेखि चासो बिषय भएपनि कुराकानी भएको देखिएको छैन ।आफैले बोलेको कुरा पूरा गर्दैनन् मोदी/:मोदी पहिलो पटक नेपाल आउँदा प्रहरी प्रतिष्ठान निर्माणको विषयले निकै चर्चा पाएको थियो । पहिलो भ्रमणमा समझदारीपत्रमा छिट्टै हस्ताक्षर गर्ने सहमती भयो । तर काम बघि बढको छैन । त्यस्तै पशुपतिनाथ मन्दिरमा धर्मशालाको निर्माण दुई महिनामै थाल्ने वाचा गरेका थिए । उक्त धर्मशाला वि.स. २०५३ सालमा नै भारतीय सहयोगमा बनाउने गरी शिलन्यास भएको थियो । मोदीले दुई महिनामा नै निर्माण कार्य सुरु हुने बताएपनि अहिलेसम्म सुरु हुन सकेको छैन । त्यस्तै नेपालको ब्यबस्थापिका संसदमा सम्बोधन गर्दै मोदीले भारतबाट नेपाल फोन गर्दा लाग्ने शुल्क घटाउने वाचा गरेका थिए । तर त्यो वाचा अहिलेसम्म कार्यन्वयन हुन सकेकौ छैन । उनले महाकाली नदीमा चार लेनको पुल बनाईदिने बताएका थिए । तर त्यो वाचा पनि आलटालम छ ।
सीमा विवाद र डुवानबारे मौनता मै टुङिगियो/:त्यस्तै नेपालको सिमामा बारम्बार हुने गरेको विवादका बारेमा पनि मोदी मौन रहे । नेपाली जनताले आफ्नो भूमीलाई आफ्नो भन्न नपाइरहेको यो अबस्थामा बल्झँदो विवादबारे उनी बोलेनन् । त्यस्तै हरेक बर्खामा तराइको भुभाग डुवानले नेपाली र भारती जनतासमेत प्रताडित हुने गरेका छन् । जुन बर्षेनीको गम्भीर विष्यबारे पनि मोदी नबोलिकनै विषय टुङ्गियो । नेपालमा जलमार्गदेखि रेलमार्गसम्मको कुरा गरेर फेरि पुरानै प्रवृत्तिको गफ दोहो¥याएर तर काम हुन्छ भन्नेमा अझै सन्देह छ ।ओलीले पनि एउटा भनेका थिए गरे अर्कै/;मोदीको मात्रै होइन नेपालका प्रधनमन्त्री केपी ओलीकै पनि भनाइ र ब्यबहार विपरित देखियो । ओलीले जे जे बोलेर भारतको विरोध गर्थे त्यस्ता विषयमा ओली मौन बसे जस्को कारण ओलीले चुनाव ताका दिएको भाषण पनि खोक्रो राष्ट्रबादको थियो भनेर आलोचना शुरु भएको छ ।
नाकाबन्दीको विरोध गर्दा पक्राऊ गरियो:/भारतले गरेको पाँच महिने अघोषित नाकाबन्दीका बारेमा मोदी र ओली दुबै मौन रहे भने विरोध गर्नेलाई समेत पक्राउ गरियो । नाकाबन्दीको विरोध गरेको भन्दै केही पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई पक्राउ गरियो । विवेकशील साझा पार्टीले मोदी जी स्वागत छ तर नाकाबन्दी बिर्सेका छैनौं भन्ने व्यानर मात्रै निकालिएन कि सो पार्टीको त्यही व्यानर लिएर बस्नेहरुलाई पक्राउ गरियो भने पार्टी कार्यालयबाट समेत त्यो व्यानर प्रहरीले जवरजस्त निकाल्यो ।यसरी पक्राउ पर्नेमा विवेकशील साझा पार्टीका ५ नंं प्रदेश संयोजक अनुपमान सैंजू र रुपन्देही जिल्ला संयोजक हरिकृष्ण अधिकारीसहित १२ जनालाई पक्राउ गरेको हो । शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा हस्तक्षेप गरेर सरकारले निरंकुश चरित्र देखाएको पक्राउ परेका पार्टीका प्रदेश संयोजक सैंजूले बताएका छन् । त्यस्तै नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी नेता सीपी गजुरेल काठमाडौंबाट पक्राउ परे । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको बिरोध गरेको भन्दै उनलाई बालाजु नयाँ बसपार्क क्षेत्रबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिइएको थियो भने विरोध गर्ने ग्रेटर नेपालका अभियन्ता फणिन्द्र नेपाल लगायत पनि पक्राउ परे ।
नेपाली पत्रकारहरुलाई हेपियो, भारतीयलाई च्यापियो/:भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नागरिक अभिनन्दन कार्यक्रममा निजी सञ्चार माध्यमहरुलाई प्रवेशमा रोक लगाइएको थियो । काठमाडौं महानगरपालिकाले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई राष्ट्रियसभा गृहमा कार्यक्रमका लागि पास जारी गरिएको भएपनि ठाउँ अभाव भएको भन्दै निजी सञ्चार माध्यमहरुको प्रवेशमा रोक लगाइएको थियो । यसको विरोधमा समाचार संकलनका लागि सभागृह पुगेका पत्रकारहरु फर्किएका थिए ।त्यस्तै जनकपुर, मुक्तिनाथदेखि काठमाडौंसम्म भारतीय सन्चारकर्मीहरुलाई सहज पहुँच दिइयो भने नेपाल सन्चार माध्यममा आवद्ध पत्रकारहरुलाई अनेक झमेला र तनाव दिइयो । सरकारको व्यवस्थापनमा भारतीय मिडियालाई काखी च्यापियो भने नेपालीलाई हेपियो ।
ओलीले नाकाबन्दीको उच्चारण गर्न छाडे/:भारतले अघोािषत नाकाबन्दी गर्दा प्रधानमन्त्री रहेका ओलीले त्यसबेलाको अडान क्रमश छाड्दै गइरहेका छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी आउँदा समेत उनले यसबारे बोल्न चाहेनन् । त्यतिबेला जनमत आफ्नो पक्षमा ल्याउनका लागि राष्ट्रवादी अडान लिएको र अहिले सत्ता टिकाउनका लागि मौन रहेको आरोप ओलीमाथि लाग्न थालेको छ । जसलाई कसैकसैले नक्कली राष्ट्रवादको रुपमा व्याख्या गर्न थालेका छन् ।सुरक्षामा भारतीय हावी, नेपालको कमजोर उपस्थिती/मोदीको सुरक्षामा भारतीय पक्षको हावी रहेको देखियो । भारतीय व्लाक कमान्डोले हरेक ठाउँमा सुरक्षा दियो । नेपाली सेना ,नेपाल प्रहरी लगायतका सुरक्षा निकाय देखाउँने जस्तो मात्रै रह्यो ।
मोदीकै जस्तो पोशाक लगाएर चाकडी गरे, झण्डाको आकारबारे पनि बोलेनन्/:मोदीलाई स्वागतमा प्रधानमन्त्री ओली मोदीकै जस्तो देखिने पोशाकमा जनकपुर पुगेका थिए । कुर्ता, पाइजामा र टोपी लगाएर उनी मोदी संगै देखिएका थिए । जुम्ल्याहा दाजुभाइ जस्ता देखिएका उनीहरुप्रति ओलीको चाकडी देखिएको केही नेताहरुले विश्लेषण गरेका छन् । ठूलो राष्ट्रबादको कुरा गर्ने मोदी जनकपुरमा नेपाल भारतको विगारिएको झण्डाबारे ओली मौन बसे ।अरुण तेस्रो रोक्ने एमालेले आफैँ ग¥यो शिलन्यास/:२०४८ सालदेखि चर्चामा आएको अरुण तेस्रोको काम अहिलेसम्म अगाडी नबढ्नुमा एमाले अध्यक्ष तथा प्रधनमन्त्री ओलीकै हात रहेको छ । सम्झौता भएर अगाडी बढ्न लागेको यो परियोजनाको बारेमा २०५१ साल कार्तिक १ गते नेकपा एमालेका महासचिव माधव कुमार नेपालले विश्व बैंकका अध्यक्षलाई पत्र काटे ।उक्त पत्रमा लागतमा पुर्नविचार तथा वातावरणीय दृष्टिकोण अध्ययन विषयलाई जोड्दै असहमती प्रस्तुत गरिएको थियो । जसका कारण विश्व बैंक पछि हटेको थियो । तर अहिले एमाले यो परियोजना प्रति पुर्ण रुपमा सहमत बन्दै अहिले भने मोदी आउँदा स्वीच थिचेर शिल्यान्यास भयो ।
Previous Postअष्ट्रेलियाद्वारा नेपाललाई २ अर्ब ५० करोड सहयोगको घोषणा Next Postविदेशिएका श्रीमानका श्रीमतिहरुले एकपटक अवश्य पढ्नुहोस